Egwuregwu bọọlụ 60 kacha mma maka ndị okenye | Nye m oge ntụrụndụ
Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ndị okenye
Isaac | 17/12/2021 17:48 | Emelitere ka 20/12/2021 16:09 | General
Ebe ọ bụ na e kwupụtara ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye ire ha arịgoro elu. Ihe kpatara ya bụ na, n'ihu mmachi na egwu nke ụfọdụ, kedu atụmatụ dị mma ma dị nchebe karịa ịnọrọ n'ụlọ na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi na tebụl ma nọrọ oge kacha mma nke ọchị na asọmpi na-egwu egwuregwu ndị a na-atọ ụtọ.
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ n'ime ha nke na ọ na-enwe mgbagwoju anya mgbe ụfọdụ mara ka esi ahọrọ. N'ime ntuziaka a, ị nwere ike ịghọta nke ọma ihe niile metụtara egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenye, ụdị na nhọrọ dị iche iche ị ga-eji oge kacha mma n'ụlọ ...
1 Egwuregwu bọọdụ ndị okenye kacha ere kacha mma
1.3 Party & Co. Oke 3.0
2 Kedu otu esi ahọrọ egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenye?
2.1 Egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ maka ndị okenye
2.1.3 Agbụrụ ndị nkọcha
2.1.4 Apụọ egwuregwu
2.1.5 Egwuregwu bọọdụ n'etiti ndị enyi
2.1.6 Ị na-ehichapụ Crazy
2.2 Maka ụdị ezinụlọ Trivial
2.2.2 Ihe na-adịghị mkpa nke na-ada
2.2.4 Onye choro ibu nde mmadu?
2.2.5 Gaa okwu
2.2.6 Ugbo ala
2.2.7 Jiri omenala geek gwuo egwu
2.3 Iji soro ndị enyi gwuo egwu
2.3.1 4-na-1 tebụl egwuregwu ọtụtụ
2.3.3 Tebụl ping-pong
2.3.4 Oge eruola!
2.3.5 Ọsọ oke ọhịa
2.3.6 Enwere m duo
2.3.7 Party EXIN
2.3.8 Na Parrot Ma ee ma ọ bụ mba Ọ dịghị ihe nzuzo
2.4 Maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
2.4.1 Dungeons na Dragons
2.4.2 Usoro Goliath
2.4.3 Abụ m banana
2.4.4 Agbụrụ ndị nkọcha Ka anyị na-eme mmehie
2.5 Egwuregwu bọọlụ maka abụọ
2.5.2 4 n'ahịrị
2.5.3 (Un) ndị enyi?
2.5.4 Eji okwu n'anya
2.5.5 Koodu nzuzo Devir Duo
2.5.6 Hasbro Sink the Fleet
2.5.7 ọrịa ogbu na nkwonkwo
2.6 Egwuregwu egwuregwu egwuregwu
2.6.2 Devir Carcasson
2.6.3 Ihe ize ndụ Hasbro
2.6.4 Stratego imebi
2.6.5 Monopoly kpochapụwo
2.7 Egwuregwu nkwado kacha mma
2.7.3 Devir The Forbidden Island
2.8 Maka ndị okenye
2.8.1 2000 mpempe egwuregwu
2.8.2 Pirate ụgbọ mmiri 3D mgbagwoju anya
2.8.5 Ezinụlọ UNO
2.8.6 Tic-tac-mkpịsị ụkwụ
2.8.7 bọọdụ chess, checkers na backgammon
2.8.9 Ogbe nke kaadị
2.9 Ọgbọ ọhụrụ
2.9.1 Egwuregwu bọọdụ ịntanetị na ngwa
2.9.2 Egwuregwu eziokwu agbakwunyere
3 Ajuju ajuju ajuju
3.1 Kedu ihe bụ egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye?
3.2 Gịnị kpatara ịzụrụ ụdị ntụrụndụ a?
3.3 Ebee ka ịzụta ha?
Egwuregwu bọọdụ ndị okenye kacha ere kacha mma
Enwere nnukwu ego, egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenyeAbụọ oge ochie nke a na-ere site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, yana nke kachasị ọhụrụ. Otú ọ dị, ị nwere ike ikwe ka onwe gị na-eduzi na ndepụta nke Ndị na-ere ahịa kacha mma site na eziokwu. Ha bụ ndị kacha ere na, ọ bụrụ na ha ere nke ukwuu ... ọ bụ n'ihi na ha nwere ihe pụrụ iche:
GUATAFAC - Egwuregwu nke ...
Ị ga-eme oriri ma ọ bụ nzukọ gị na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi gị? Ị chọrọ ọchị a na-ekwe nkwa? Mgbe ahụ egwuregwu bọọdụ a maka ndị okenye bụ ihe ị na-achọ. Ezubere maka ndị karịrị afọ 16. Ị nwere sekọnd 8 iji chepụta echiche kachasị njọ nke ezinụlọ gị na ndị enyi gị. Nwa ọchị na njakịrị rụrụ arụ anakọtara na mkpụrụedemede 400 nwere ajụjụ yana mkpụrụedemede 80 pụrụ iche.
ebo nke SINVERGUENZES ...
Otu egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenye. O nwere ihe ịma aka nke ụdị ọ bụla, ha niile na-eju oke ọchị nke mere na a na-achị ọchị ọchị. Na kpamkpam nzuzu na-akpa ọchị ajụjụ. Zuru oke inye onwe gị onyinye ma ọ bụ inye ndị ị hụrụ n'anya. N'ezie, ọ bụ maka ndị karịrị afọ 18 ...
Party & Co. Oke 3.0
Nsogbu - Party & Co ...
Na ọ bụ n'etiti ndị kasị ere ahịa abụghị ihe ijuanya. Ị nwere ike igwu egwu n'ìgwè, na-eji 12 dị iche iche ule na 4 edemede. Na ịse ule, ajụjụ, mimicry, ime ihe, wdg. Otu n'ime ihe niile dị n'otu nke na-agaghị agwụ gị ike n'agbanyeghị otú ị na-egwu egwu, nke ahụ ga-eme ka onye ọ bụla nwee ọmarịcha oge igwu egwu.
COCORROTO- Egwuregwu nke ...
Egwuregwu kaadị egwu nwere ihe karịrị kaadị 600 iji nweta ihe ruru awa 234 nke ịchị ọchị. Egwuregwu maka ndị okenye nke ọnọdụ agụụ mmekọahụ, egwu egwu, ọchị ojii, na ụkpụrụ omume 0% agwakọtara. Ihe ọ bụla na-aga ịchị ọchị na-akwụsịghị. Maka nke a, onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere kaadị ọcha 11 (azịza), na onye ọkpụkpọ na-agụ kaadị na-acha anụnụ anụnụ nwere oghere oghere. N'ụzọ dị otú a, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ahọrọ kaadị kacha atọ ụtọ ha nwere iji mechaa ahịrịokwu ahụ.
Kedu otu esi ahọrọ egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenye?
N'oge họrọ egwuregwu bọọlụ kacha mma maka ndị okenye Obi abụọ nwere ike ibilite, ọ bụghịkwa onye ọ bụla nwere mmasị na otu isiokwu na usoro egwuregwu. Enwere ha maka otu dị iche iche, site na ụfọdụ kpọmkwem na ndị òtù ezinụlọ, ndị ọzọ dabara adaba maka otu ndị enyi n'ihi ọdịnaya ma ọ bụ isiokwu ha, na ọbụna ụfọdụ kpọmkwem n'ihe gbasara ụdị egwuregwu a na-ajụ. Ya mere, ị ga-amata ngalaba dị iche iche a na-achọkarị:
Egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ maka ndị okenye
Enwere ụfọdụ egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye na-apụta ìhè karịsịa maka ọchị ha na-emepụta, ndị ahụ na-atọ ọchị nke onye ọ bụla ga-ejedebe na ọchị dị ọcha. Ndị na-edobe gị n'ọnọdụ ndị na-akpa ọchị, ma ọ bụ mee ka ị wepụta mmụọ ọchị ọchị gị. Ndị na-eme ka gị na ndị ị hụrụ n'anya na-enwe mgbede agaghị echefu echefu nke ga-anọgide na-echeta mgbe niile. Nke kacha atọ ọchị nke niile bụ:
Glop Mimika - Egwuregwu nke ...
Mgbe ị zutere ya, ọ ga-abụ otu n'ime egwuregwu bọọdụ ndị okenye na-eṅomi ga-eso na ọkacha mmasị gị. Ezubere maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, na-achị ọchị zuru oke na mmetụ atụmatụ, ọkwa dị iche iche, otu, yana ebumnuche nke inweta otu n'ime ụdị kaadị ọ bụla iji merie.
Glop Pinta - Egwuregwu nke ...
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka nke gara aga, ma ọ bụ ihe zuru oke, ebe ọ bụ na a na-emepụta ya maka oge ndị ahụ na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi mgbe ị chọrọ ntụrụndụ na ntụrụndụ. Ma, n'adịghị ka nke gara aga, ọ bụ maka eserese na ịkọ nkọ.
Agbụrụ ndị nkọcha
ebo nke SINVERGUENZAS -...
Egwuregwu na-atọ ọchị Mere na Spain, dabere na kaadị ma zuru oke maka iso ndị enyi na-achị ọchị. Site na mmetụ hooligan, ị ga-ebo ebubo na ha ga-ebo gị ebubo, na mgbakwunye na ido onwe gị n'okpuru ule na-ezighị ezi na itinye aka na nsogbu mmekọrịta ọha na eze nke ị na-echetụbeghị. Egwuregwu nke ị maara ka isi mmalite, mana ị maghị ka isi gwụ ...
Zụrụ ebo ndị ọchụ
Egwuregwu Gbanyụọ - Battalion ...
Egwuregwu na-atọ ụtọ maka afọ niile yana nwere duels pụrụ iche 120 iji mee ihu na ihu wee gosipụta ike mmụọ gị, ike anụ ahụ, obi ike, nka ma ọ bụ chi gị. Ha na-agba ọsọ ma na-atọ ụtọ duels, na nke ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-eme dị ka ndị ikpe iji chọpụta onye meriri.
Egwuregwu bọọdụ n'etiti ndị enyi
😈 Enyi🤣 -Egwuregwu...
Ọ dị mma maka nnọkọ ndị enyi, bachelorette ma ọ bụ nnọkọ bachelorette, wdg. Ọchị na ezigbo vibes ekele maka ajụjụ agbadoro anya nke a ga-edobe gị ma nyefee gị. Ị ga-atụfu ihere niile site na ihe ịma aka na ajụjụ ndị dị n'etiti kaadị ...
Zụrụ egwuregwu bọọlụ n'etiti ndị enyi
Ị na-ehichapụ Crazy
A ezi ọzọ ọzọ Party, e mere maka dum ezinụlọ na ndị enyi, si 8 afọ. Egwuregwu na-atọ ụtọ nke na-ejikọta ule dị iche iche, dị ka ige ntị, ịse ihe, nmimi, ebubo mkparị na nnukwu ara ikpeazụ. Onye mbụ ga-enweta 5 loci niile ga-emeri okpueze nke Eze nzuzu ...
Egwuregwu Hasbro - TABOO ...
Ọ dịghị mkpa mmeghe, ọ bụ kpochapụwo. Maka onye ọ bụla, n'ebumnobi nke inye nkọwa na-ejighi okwu ndị amachibidoro. Site na ọdịnaya emelitere yana ihe ruru okwu 1000 yana ụzọ egwu egwu 5 dị iche iche. Ọ bụrụ na nwa nwoke Altar na Xavier Deltell nwere oge siri ike na oche cramps na mmemme Me slips, ugbu a ị nwere ike inwe ọmịiko na ha ...
Hasbro - Jenga ume ọhụrụ ...
Mega Hi-Tower n'ime akpa -...
Omuma ọzọ n'etiti oge gboo, dị mfe, dị mfe igwu egwu, maka ndị niile na-ege ntị, na-atọ ụtọ. Ọ bụ ụlọ elu e ji ihe mgbochi osisi wuo na ị ga-agbagharị n'otu n'otu na-agbalị ka ọ ghara ịdaba. Ọ bụghị naanị iwepu mpempe gị, mana gbasara ịgbalị ime ka usoro ahụ ghara ịdị n'otu ka o kwere mee ka onye iro metụrụ ya aka n'ọzọ na-esote nwere mgbagwoju anya.
Zụrụ Jenga Zụrụ Giant Jenga
Maka ụdị ezinụlọ Trivial
Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu bọọlụ maka ụdị ezinụlọ Trivial, na ajụjụ na ebe ị ga-egosi onyinye nke ọgụgụ isi na omenala bụ isi, mgbe ahụ ị kwesịrị ileba anya na nhọrọ ọzọ a. N'ebe a, ị ga-ahụ akụkọ ụfọdụ nke ebumnobi ha bụ inye onye kacha mara amara ụgwọ ọrụ:
N'ezie, n'etiti egwuregwu ajụjụ, Trivial n'onwe ya enweghị ike ịpụ. Egwuregwu ọdịnala ọdịnala nwere ụdị dị iche iche nke ị ga-agbalị ịza ajụjụ niile nke ọma wee nweta mpekere chiiz niile tupu onye ọ bụla ọzọ.
Zụta ịchụ nta nke nta
Ihe na-adịghị mkpa nke na-ada
Eleven Force LQSA Trivial ...
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado La que se avecina, mgbe ahụ ị nọ na chioma, ebe enwere egwuregwu bọọlụ dị ka Trivial nwere ọtụtụ isiokwu (Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, The Lord of the Rings, The Big Bang Theory). ...), n'etiti ha na-Spanish usoro LQSA. Ị chere na ị maara ihe odide ya nke ọma na ihe nzuzo niile nke usoro ahụ? Nwalee onwe gị…
Zụrụ obere LQSA
Goliath - Slap, Egwuregwu nke ...
Egwuregwu efu ọzọ maka ezinụlọ dum, site na 8 afọ. Otu bọọdụ, kaadị 50 nwere ajụjụ 500, yana amamihe gị ịza nke ọma na akara akara. Nke ahụ bụ mgbanwe, ma kpachara anya ... ajụjụ ndị ahụ jupụtara na ọnyà, na mgbe ụfọdụ ọgụgụ isi dị mma karịa ọsọ.
Onye choro ibu nde mmadu?
Ndị mmadụ sitere na afọ 12 nwere ike igwu egwu, yana ndị egwuregwu 2 ma ọ bụ karịa. Egwuregwu bọọdụ maka ndị okenye gbadoro ụkwụ na ajụjụ onyonyo a ma ama nwere otu aha. Ị ga-aza ajụjụ ndị a, ị ga-enwekwa usoro ndị na-akpa ọchị mgbe nhọrọ ahụ ga-agbagwoju anya. A na-enye gị azịza nhọrọ ọtụtụ, ma ị ga-ahọrọ nke ziri ezi, na-abawanye ọkwa nke ihe isi ike oge ọ bụla.
Zụrụ onye chọrọ ịbụ nde mmadụ?
Famogames- Paswọdu ...
Egwuregwu bọọdụ maka ezinụlọ dum dabere na ajụjụ TV. Ị ga-anwale ihe ọmụma gị n'ime ule 6 dị iche iche, yana ihe karịrị 10.000 ajụjụ na rosco ikpeazụ iji gbalịa ịkọkwu okwu tupu oge agwụ.
Egwuregwu Hasbro -...
Otu n'ime egwuregwu ndị na-atọ ọchị n'ebe ahụ, yana nke kachasị mfe, mana nke ga-etinye echiche gị, imepụta ihe na okwu gị n'ule. Na Scattergories ị ga-enwe ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 2 ruo 6, site na 13 afọ, na nke ị ga-ahụ okwu ndị dị na otu na nke na-amalite site na otu mkpụrụedemede.
Jiri omenala geek gwuo egwu
Jiri omenala geek egwu egwu...
Aha maka afọ niile yana ndị na-akwado ụwa nke teknụzụ, ịntanetị, egwuregwu vidiyo, akụkọ sayensị na ndị dike. Ya bụ, maka geeks. Yabụ ị nwere ike nwalee ihe ọmụma gị ma ọ bụ nke ndị enyi gị na isiokwu ndị a niile.
Iji soro ndị enyi gwuo egwu
Ịgba egwu dị ka ezinụlọ na ime ya abụghị otu ihe na ndị enyi, ebe ikuku dịtụ iche. Ha na-atọ ụtọ nke ukwuu, yana ọdịnaya nwere ike ịgụnye igosi gị otu ị na-esi egosi naanị gị na ndị enyi, ma ọ bụ ndị na-adabaghị maka ezinụlọ dum. Maka oge ndị ahụ gị na ezigbo ndị enyi gị, aha kacha mma ị nwere ike ịhụ bụ:
4-na-1 tebụl egwuregwu ọtụtụ
Tebụl egwuregwu ọtụtụ Leomark ...
Tebụl egwuregwu ọtụtụ egwuregwu dị mma maka iso ndị enyi gwurie egwu. Ọ nwere egwuregwu 4 n'otu tebụl, dị ka billiard, foosball, ping pong, na hockey. Na ihe ndị dị mma dị ka osisi, usoro siri ike, akụkụ nke 120 × 61 cm osisi na 82 cm dị elu. A na-agbakọta ya ngwa ngwa na ngwa ngwa ma nwee asambodo mma na nchekwa Europe.
Zụrụ tebụl egwuregwu ọtụtụ
Maxstore bọọlụ ...
Bọọlụ okpokoro dị mma, na osisi MDF na ọkpụrụkpụ nke 15 mm. Akụkụ ndị ahụ bụ 121x101x79 cm. Na ụkwụ kwụsiri ike na ịdị elu-mgbanwe. Na-agụnye nkọwa dị ka counter goolu, nke nwere ogwe ígwè na aka rọba na-adịghị amị amị, ihe osise esere, na ihe njide iko 2. A na-etinye bọọlụ abụọ na ntuziaka nrụnye.
Dione S500o - Tebụl ...
Tebụl ping-pong na-atụgharị ka ọ ghara iburu ohere, dị mma maka ime ụlọ na n'èzí, ebe ọ na-eguzogide ihe ndị ahụ. Na osisi siri ike nke nwere elu 274 × 152.5 × 76 cm. Ọ na-agụnye wiil 8 iji nwee ike ịtụgharị ma ọ bụ ịkwaga ya ngwa ngwa, yana breeki iji gbochie ya ịkwagharị n'oge egwuregwu. Agụnyeghị bọọlụ egwuregwu na paddles, mana ị nwere ike zụta ha iche:
Ịzụta tebụl ping-pong
Ịzụta shọvel na bọọlụ
Repos mmepụta - Oge ...
Egwuregwu zuru oke maka ndị enyi nke ị ga-echepụta agwa. Ha nwere ike ịbụ ndị a ma ama ma ọ bụ akụkọ ifo, na ekele niile maka nkọwa ndị e nyere nke agwa ọ bụla na-enweghị aha ha. Nke ahụ na agba nke mbụ, na agba na-esote ọkwa na-ebili ma ha ga-akụ naanị otu okwu. Na agba nke atọ, naanị mimicry dị irè.
Zụrụ oge eruola!
Ọsọ oke ọhịa
Zygomatic - Ọsọ Jungle ...
Egwuregwu kaadị nwere obere egwuregwu dị iche iche. Kwesịrị ekwesị maka afọ 7 na karịa. Ị ga-achọta kaadị ndị nwere otu akara dị ka nke gị wee jide totem ahụ. Nwere ihe karịrị akara 50 na kaadị 55 dị iche iche. Ọsọ, nleba anya na ntụgharị ga-abụ isi.
Ịzụta ọsọ oke ọhịa
Enwere m duo
TENGO DUO - Ọhụrụ ...
Egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ ebe ị na-egwu kaadị ma ị ga-akwado ya. Atụ anya, ọmịiko na ndị enyi gị, na ọsọ ga-eduga gị na mmeri. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-anwa ịkọ azịza ndị egwuregwu ndị ọzọ nyere ebe ndị ọzọ na-agbalị ịkọ nke ha.
Zụrụ m nwere Duo
EXIN Fiesta - Egwuregwu nke ...
Ọ bụ igbe nwere 3 na 1. Ị ga-ahụ egwuregwu igbu ọchụ, nke ndị egwuregwu na-emeghị ihe ọjọọ ga-achọpụta onye na-egbu ọchụ na-ekpuchi anya, egwuregwu otu egwuregwu ọzọ, ebe ị ga-eche ọtụtụ okwu dị ka o kwere mee na-agbaso iwu nke ọ bụla (nkọwa). , mimicry, eserese, ụda), na egwuregwu ọsọ, nke na-agbalị ịza ọtụtụ kaadị dị ka o kwere mee na 1 min gị na otu gị.
Zụrụ EXIN Fiesta
Na Parrot Ma ee ma ọ bụ mba Ọ dịghị ihe nzuzo
Egwuregwu Al Loro - Ni Si Ni...
Egwuregwu tebụl maka ndị okenye dị mma maka nnọkọ na ndị enyi. Ọ mejupụtara ịza 10 kwadebere na oseose ajụjụ na-enweghị ịsị Ee ma ọ bụ Mba. 2 mmadụ ma ọ bụ dị ka ọtụtụ dị ka ị chọrọ nwere ike igwu. Ụzọ ị ga-esi na-akpakọrịta na ndị ọzọ ị hụtụrụla ma ọ bụ n'ebe a na-eme mmanya.
Zụrụ ma ee ma ọ bụ mba
Maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
E nwekwara ụfọdụ egwuregwu bọọlụ maka ndị nọ n'afọ iri na ụma, nwere ikuku ọhụrụ na nke ọgbara ọhụrụ dabere na ọgbọ ọhụrụ. Ngwaahịa nwere jargon ntorobịa, nke nwere isiokwu dị naanị maka ọgbọ a, ma ọ bụ nke na-egosi ịmara teknụzụ ọhụrụ, usoro, wdg. Ụfọdụ ọmụmaatụ ndị a bụ:
Dungeons na Dragons
Igbe ulo mkporo & Dragons ...
Ngwa ụlọ mkpọrọ dị mkpa ...
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kacha ewu ewu. Dragons na ulo mkporo aghọwo ihe ewu ewu karịsịa mgbe usoro Big Bang Theory gasịrị, ebe ọ bụ na ihe odide ya na-egwuri egwu. Otu egwuregwu bọọlụ kacha mma ma ọ bụrụ na-amasị gị echiche na echiche efu. Egwuregwu ịkọ akụkọ nke ndị egwuregwu ga-emikpu onwe ha n'ụdị ihe egwu egwu dị iche iche, site na ịgagharị maze, ịkwakọrọ akụ, ịlụ ọgụ na nnukwu anụ akụkọ ifo, wdg.
Zụrụ igbe mmalite D&D
Zụrụ ngwa D&D dị mkpa
Egwuregwu Goliath, ...
Egwuregwu na-agwakọta ụfọdụ egwuregwu ndị ọzọ n'ime otu. Ọ bụ ụdị atụmatụ, ị ga-amụtakwa igbochi ndị na-emegide gị ma wepụ iberibe ha na bọọdụ tupu ha ejiri gị mee ya. Ị nwere ike igwu egwu n'otu n'otu ma ọ bụ na njikọ aka. Ị ga-ahụ na ọ dị ka atọ n'ahịrị, ọ bụ ezie na na nke a, ị ga-etinyerịrị ibe 5 nke otu agba ahụ n'akụkụ, kwụ ọtọ ma ọ bụ diagonally, ma dabere na kaadị ndị metụrụ gị aka n'aka, dị ka a ga-asị na ọ bụ poker.
Abụ m banana
Aha na-atọ ụtọ, ike na ntorobịa nke ị ga-enwe ndidi na ụlọ ọgwụ psychiatric nke kwenyere ihe ma ọ bụ anụmanụ, na egwuregwu 90 nke abụọ ebe ndị egwuregwu na-enweghị ike ikwu okwu, ma na mmegharị ahụ ha ga-eme ka ndị ọzọ mara ihe ọ bụ. Ha nwere ike igwu egwu 2 ma ọ bụ karịa, ọ dịkwa mma maka ihe karịrị afọ 8. Ma kpachara anya, ebe ọ bụ na "dibịa" ekwela ka dọkịta ahụ hụ ihe ị bụ, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ya n'ime otu na-adịghị ka "chota".
Zụrụ abụ m banana
Agbụrụ ndị nkọcha Ka anyị na-eme mmehie
Agbụrụ ndị njo...
Aha ọzọ n'usoro egwuregwu bọọlụ Spanish a. Otu n'ime egwuregwu ndị ahụ bụ hooligans yana ọchị na-ekwe nkwa. Kpọkọta ndị ọrụ ibe gị, megharịa kaadị ndị ahụ, wee malite nke mbụ. Enwere ụdị kaadị ọhụrụ 4, ebubo, ịma aka ọha, WTF! Ajụjụ na kaadị oghere ka ị wepụta ihe ịchọrọ.
Zụrụ Ka anyị na-eme mmehie
Egwuregwu bọọlụ maka abụọ
na egwuregwu bọọlụ maka abụọ Ha bụ kpochapụwo, ma enwere ọtụtụ n'ime ha. Ịkpọ egwu dị ka di na nwunye de facto, ma ọ bụ ụdị di na nwunye ọ bụla ọzọ. Zuru oke maka mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị ike ịgbakọta ma ọ gaghị ekwe omume iji bọọdụ ndị ọzọ na-achọkarị otu ma ọ bụ otu buru ibu. Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ndị okenye ụdị a bụ:
Billiard Harmony ...
Inwe tebụl ọdọ mmiri n'ime ụlọ na-enweghị oke ohere ọ bụghị mgbe niile, ma na tebụl iri nri a nke na-atụgharị n'ime ọdọ mmiri, ọ bụ. Ọrụ na ihe ọchị na-agbakọta ọnụ na tebụl a na-agbanwe agbanwe na-atụ 206.5 × 116.5 × 80 cm n'ogologo, obosara na ịdị elu. Ọ na-agụnye ngwa niile a ga-egwu ma nwee ike ịhọrọ ya na teepu na agba dị iche iche.
Ịzụta okpokoro ọdọ mmiri
Falomir - Egwuregwu 4 ...
Ibe nke agba abụọ, ndị sonyere abụọ. Echiche bụ ịbanye ha na panel iji gbalịa ịmepụta ahịrị ahịrị 4 n'ahịrị nke otu agba gị. Onye mmegide ga-eme otu ihe ahụ, ebe ọ na-egbochi gị ka ị ghara inweta ya mbụ.
Zụrụ 4 n'ịntanetị
(Un) ndị enyi?
(Un) ndị enyi? -...
Ọ bụghị naanị na ọ bụ egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye 2, mana ọ pụrụ iche maka ndị di na nwunye. N'ime ya ị ga-enwe ike ịnwale ihe ị maara gbasara onye òtù ọlụlụ gị, na ajụjụ gbasara ndụ kwa ụbọchị, àgwà, mmekọrịta chiri anya, mmasị onwe onye, ​​wdg. Họrọ leta nwere ajụjụ, votu maka azịza kacha dabara gị mma, ma mee ka onye nke ọzọ zaa ka ọ mara ma ọ dabara...
Zụrụ ndị enyi (Un)?
Eji okwu n'anya
Ihunanya na okwu -...
Egwuregwu bọọlụ ọzọ emebere maka ndị di na nwunye. Site na ya, ị ga-enwe ike iwusi njikọ siri ike ma nyere gị aka ịmatakwu di na nwunye ahụ, ọbụlagodi na nzuzo nzuzo. Ọ dị mfe igwu egwu, enwere kaadị 100 nwere ajụjụ ndị e mere iji mee ka mkparịta ụka banyere oge gara aga, ọdịnihu, mmetụta, ego, ọchịchọ, mmekọrịta chiri anya, wdg.
Zụrụ ịhụnanya n'okwu
Koodu nzuzo Devir Duo
Koodu nzuzo Devir
Ọ bụ egwuregwu nke mgbagwoju anya, ịmụta na inwe anụrị. Ọ na-enye gị ohere igwu egwu ka ọ bụrụ onye kachasị ngwa ngwa na nke kachasị mma iji chọpụta ihe ndị dị nro na nke dị omimi ma banye na akpụkpọ ụkwụ nke onye nledo nzuzo iji chọpụta ihe zoro ezo wee si otú ahụ merie egwuregwu ahụ tupu onye iro gị emee.
Zụrụ koodu nzuzo Duo
Hasbro Sink the Fleet
Egwuregwu Hasbro- Sink The ...
Egwuregwu ndị agha mmiri nke ị na-egwu na nhazi iji gbalịa imikpu ụgbọ mmiri ndị iro gị. Ha ga-anọkwa n’ọnọdụ ndị ọ họpụtara, ị gaghịkwa ahụ ha, ọ gaghịkwa ahụ nke gị. A na-akpọ ya kpuru ìsì, na-agbalị ịchọta ebe ha ga-ekpochapụ ha. Obi abụọ adịghị ya ọzọ nke oge ochie maka abụọ ...
Zụrụ ụgbọ mmiri Sink
ọrịa ogbu na nkwonkwo
Egwuregwu ARTAGIA fun na ...
Egwuregwu pụrụ iche na-atọ ụtọ maka ndị di na nwunye nke ị nwere ike imeziwanye ntụkwasị obi, jiri mkparịta ụka na-atọ ọchị, ịkwa iko, wdg. Họrọ kaadị, zaa ajụjụ ahụ, ma ọ bụ mee ihe ịma aka ihunanya a tụrụ aro. Ị amaja?
Ndị na-akwado atụmatụ chọrọ ịchụpụ Warcraft, Age of Empires, Imperium, wdg, ma gbanwee gaa na egwuregwu tebụl ga-enwe ụtọ utu aha dị ka:
Devir - Catan, egwuregwu nke ...
Ọ bụ egwuregwu atụmatụ na-emeri ihe nrite, yana ndị egwuregwu karịrị nde abụọ enweelarị. Ọ na-achọ nlebara anya na ịbụ ezigbo onye atụmatụ iji merie. Akwadoro maka afọ 2 na karịa yana maka ndị egwuregwu 10 ma ọ bụ 3. N'ime ya ị ga-abụ otu n'ime ndị mbụ biri n'àgwàetiti Catan, na obodo mbụ na akụrụngwa ga-amalite ịpụta. Nke nta nke nta, ị ga-etolite, obodo ndị a na-agbanwe ghọọ obodo, na-emeziwanye ụzọ ụgbọ njem na ịzụ ahịa, ụzọ nke iji ihe onwunwe eme ihe, wdg.
Otu n'ime egwuregwu atụmatụ kachasị mma yana otu n'ime ihe kachasị elu. Ọ gụnyere bọọdụ nwere mgbasawanye enwere ike itinyekwu ohere na ọdịnaya. Ọ dabara maka ndị egwuregwu 2 ruo 5, ọ dịkwa mma maka afọ 7 na karịa. Ihe karịrị nde ndị egwuregwu 10 abanyela n'egwuregwu a nke ị ga-eme ka ókèala gị gbasaa, lụ ọgụ ma merie ihe ọhụrụ.
Ihe ize ndụ Hasbro
Egwuregwu Hasbro - ihe egwu ...
Ihe ọzọ dị egwu nke atụmatụ nke mmeri maka alaeze ukwu gị na-emeri. N'iji ọnụọgụ 300, kaadị ozi, yana ọrụ nzuzo iri na abụọ, yana bọọdụ iji dobe ndị agha gị wee lụọ ọgụ n'ọgụ dị egwu. Egwuregwu jupụtara na njikọ aka, mbuso agha mberede na aghụghọ.
Zụrụ ihe egwu
Afọ 8 na karịa na maka ndị egwuregwu 2, Stratego bụ egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma maka ndị okenye. Bọdụ kpochapụwo ebe ị nwere ike ịwakpo ma chebe onwe gị iji gbalịa imeri ọkọlọtọ ndị iro, ya bụ, ụdị CTF. Na iberibe 40 maka ndị agha nke ọkwa dị iche iche ga-enwe ike ịnwale echiche ezi uche na atụmatụ gị.
Monopoly - Omuma, ochie ...
Enwere ọtụtụ ụdị nke Monopoly, mana otu n'ime ihe ịga nke ọma ka bụ kpochapụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị egwuregwu nke atụmatụ iji mee ihe, ọ chọrọ amamihe ma mara otú e si ejikwa mara otú e si azụta na ire iji nweta alaeze nke akụ na ụba.
Egwuregwu nkwado kacha mma
Ma egwuregwu bọọlụ nkwadoIji soro njikọ gwuo egwu, aha kacha mma ị nwere ike zụta adịla:
Egwuregwu bọọlụ maka afọ niile sitere na afọ 8. Ọ bụ egwuregwu imekọ ihe ọnụ nke ị ga-agbalịsi ike dozie ihe omimi, ndị egwuregwu niile ga-emeri ma ọ bụ tụfuo ọnụ. Ihe mgbaru ọsọ bụ ịchọpụta ihe dị n'azụ ọnwụ nke mmụọ nke ụlọ a na-ekpo ọkụ ma mee ka mkpụrụ obi ya zuru ike. Otu onye ọkpụkpọ na-ewere ọrụ nke mmụọ, ndị egwuregwu ndị ọzọ na-egwu egwu na ndị na-ajụ ase ga-anata usoro ihe ngosi na-arụtụ aka na nzuzo ...
Egwuregwu a na-ewega gị na February 24, 1895 na London. Bọmbụ agbawala na nzuko omeiwu na Sherlock Holmes, ya na onye na-enyere ya aka, ga-etinye aka n'ịmụta eziokwu gbasara okwu a.
Devir The Forbidden Island
Devir-The Forbidden Island ...
Egwuregwu nkwado ezinụlọ na-enweta ihe nrite. N'ime ya ị na-emikpu onwe gị n'ime akpụkpọ anụ nke ndị na-eme njem na-aghaghị iweghachite akụ nke agwaetiti dị omimi. Enwere ike ịkpọ ya site na afọ 10. Jikọta kaadị na ọnụ ọgụgụ maka bọọdụ iji gbalịa izere ihe egwu dị na ya wee nweta akụ na ụba.
Zụrụ Agwaetiti a machibidoro iwu
Egwuregwu Z-man Spain
Egwuregwu nkwado a dabara adaba maka ndị egwuregwu 2 ruo 4, ndị dị afọ 14 ma ọ bụ karịa, na nke ị ga-agbalịrịrị ịzọpụta mmadụ site na ọrịa na-efe efe. Ọrịa na ụmụ ahụhụ ndị gbasaara na-egbu ọtụtụ ndụ, na ị ga-achọpụta ọgwụgwọ. Iji mee nke a, ha ga-aga gburugburu ụwa na-achọ ihe ndị dị mkpa iji mejupụta ọgwụgwọ ahụ ...
Zụrụ ọrịa na-efe efe
Maka ndị okenye
Ọzọkwa ndị okenye Ha nwere ike inwe ọmarịcha oge igwu egwu ọtụtụ egwuregwu bọọlụ, maka ọtụtụ afọ «Senior». Ụfọdụ ndị na-ama kpochapụwo, na na-anọgide na-akpali mmasị na nke a afọ otu, ndị ọzọ dịtụ ọhụrụ, ọ dịghị ihe ọzọ na mba anyị, ebe ọ bụ na ha e si n'ebe ndị ọzọ na mbara ala. Aha ndị a ga-atụle nke enweghị ike ịnwụ bụ:
2000 mpempe egwuregwu
Educa - akara nke ...
Ihe mgbagwoju anya maka ndị okenye, nwere 2000 iberibe, yana foto mara mma nke akara Europe. Ihe mgbagwoju anya, otu oge gbakọtara, nwere akụkụ nke 96 × 68 cm. Mpempe ya dị elu ma dabara nke ọma, na mgbakwunye na ihe eji eme gburugburu ebe obibi. Kwesịrị ekwesị maka ụmụaka sitere na 12 afọ, ndị okenye na ndị okenye.
Zụrụ ihe mgbagwoju anya maka ndị okenye
Pirate ụgbọ mmiri 3D mgbagwoju anya
CubicFun mgbagwoju anya 3D LED ...
Ihe mgbagwoju anya 3D dị egwu iji mepụta ụgbọ mmiri pirate mara mma. Emere ya bụ ụfụfụ EPS na-eguzogide ọgwụ, yana iberibe 340 iji wuo ụdị mmegwara nke Queen Anne n'ọtụtụ, yana akụkụ 68x25x64 cm. Ozugbo agbakọtara, ọ nwere sistemụ ọkụ ọkụ LED nwere ọkụ 15 nke batrị AA 2 na-akwado. Kwesịrị ekwesị maka afọ 14 na karịa.
Zụrụ ihe mgbagwoju anya 3D
Falomir- XXL Egwuregwu Bingo
A kpochapụwo n'etiti oge ochie na maka ezinụlọ dum, ọ bụ ezie na karịsịa na ndị okenye n'uche. Ọ gụnyere ịgbà bass akpaka, bọọlụ nwere ọnụọgụ na ngwa kaadị iji kpọọ. Onye buru ụzọ nweta ahịrị na bingo, meriri.
Cordays - ikpe nke ...
Kaadị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ nke ị ga-agwakọta, kesaa n'etiti ndị sonyere, wee jiri nwayọ dakọ na ọnụọgụgụ. Onye buru ụzọ tinye ibe ya niile ga-emeri.
Egwuregwu Mattel UNO Original ...
Egwuregwu kaadị ama ama na nke ọdịnala nke na-enye ndị egwuregwu 2 ohere igwu egwu n'otu n'otu ma ọ bụ na otu. Ebumnuche bụ ịbụ onye mbụ ga-agwụ na kaadị. Ma mgbe ị nwere naanị otu kaadị, echefula iti mkpu UNO!
Lewpox Tic Tac - Egwuregwu nke ...
Egwuregwu tic-tac-toe a na-ahụkarị, ịgbalị idowe nha nha atọ n'ahịrị, ma ọ bụ kwụ ọtọ, kwụ ọtọ ma ọ bụ diagonally. Gbalịakwa igbochi onye iro gị ka ọ ghara inweta ya mbụ.
Zụrụ 3 n'usoro
bọọdụ chess, checkers na backgammon
Peradix Chess ...
bọọdụ 3-in-1 iji kpọọ egwuregwu kpochapụrụ atọ ndị a na-achọghị mmeghe. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike dị mma maka ndị agadi, ha bụ egwuregwu na-enweghị afọ, ya mere ụmụaka nwekwara ike igwu egwu.
Fournier Parchis na ọgazị ...
Egwuregwu OCA na Parcheesi bụ egwuregwu ndị ọzọ kacha ewu ewu n'oge niile. Na bọọdụ a na-agbanwe agbanwe, ị nwere ike ịnwe egwuregwu abụọ maka ntụrụndụ ezinụlọ.
Ogbe nke kaadị
Fournier F20991 - oche ...
Fournier- Nº 505 Dek ...
N'ezie, n'etiti oge ochie, ị gaghị echefu egwuregwu tebụl kaadị. Na Spanish oche ma ọ bụ na French oche, dị ka masịrị gị. Ị ga-enwe ike igwu ụdị egwuregwu a na-apụghị ịgụta ọnụ, ebe ọ bụ na otu oche ahụ nwere ọtụtụ (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack, 7 na ọkara, Briscola, Burro, ...).
Zụrụ ụgbọ mmiri Spanish Zụta oche poker
N'ezie, ụdị ọzọ a enweghị ike ịpụ, nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya ekele maka ọganihu nke teknụzụ ọhụrụ. Ma ọ bụ na kọmputa, ịntanetị, na ihe ndị na-eme ihe n'eziokwu, eziokwu na-emewanyewanyewanye ma ọ bụ nkà na ụzụ eziokwu agwakọtara agbanwewokwa otú e si egwuri egwu bọọdụ. A ọgbọ ọhụrụ nke egwuregwu bọọlụ n'ihi na ndị okenye abịarute, na ị kwesịrị ịma ndị a na-akpali ọrụ:
Egwuregwu bọọdụ ịntanetị na ngwa
Enwere ọtụtụ egwuregwu bọọlụ ịntanetị ka gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị na-egwu n'ebe dị anya, yana ụfọdụ ngwa mkpanaka na-enye gị ohere ịme egwuregwu oge ochie na ọnọdụ multiplayer ma ọ bụ megide igwe. Ị nwere ike ịchọ ụlọ ahịa ngwa Google Play na App Store.
Ụfọdụ ibe weebụ nwere ihe ọṅụṅụ okpokoro n'efu bụ:
Egwuregwu eziokwu agbakwunyere
Ị nwere ike iche n'echiche egwuregwu bọọlụ nke ị nwere ike ịmegharị ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, yana ebe ị nwere ike ịhụ ihe owuwu na ihe dị n'akụkụ atọ, na ebe taịlị na-abụghị taịlị, ma na-adị ndụ ma ghọọ dike, nnukwu anụ, anụmanụ, wdg. . Ọfọn, kwụsị iche n'echiche, nke ahụ adịlarị ekele maka iko eziokwu augmented na a na-akpọ ya Tilt Five.
Foto efu (Egwuregwu bọọdụ ụmụaka) sitere na https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Algunas de las enwekarị obi abụọ na ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye bụ ndị a:
Kedu ihe bụ egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye?
Ndị a bụ egwuregwu bọọlụ na-enwekarị isiokwu na-adabaghị maka ụmụaka, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile. Ma ọ dịghị mkpa ịbụ n'ihi na ha nwere ọdịnaya kwesịrị ekwesị maka ndị okenye, ma n'ihi na e mere ha maka ndị okenye, n'ihi ya, ọ ga-abụ na ụmụntakịrị nọ n'ime ụlọ amaghị otú e si egwu egwu ma ọ bụ na-agwụ ike.
Gịnị kpatara ịzụrụ ụdị ntụrụndụ a?
N'otu aka ahụ, mgbe ọ bụla a na-egwu egwuregwu na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, a na-etinye oge dị ukwuu, na-achị ọchị na-ekwekwa n'ezie. Ọzọkwa, ugbu a na ọnọdụ ọrịa na-efe efe, ọ nwere ike ịbụ nnukwu atụmatụ dị mma maka ịnọpụ. N'aka nke ọzọ, ha na-enyekwara gị aka ịmekọrịta mmekọrịta ma pụọ ​​​​na PC ihuenyo ma ọ bụ ihe njikwa egwuregwu, nke na-abụkarị egwuregwu na-akwalite mmadụ n'otu n'otu na ikewapụ onwe ya. N'ụzọ dị nnọọ iche nke egwuregwu bọọlụ kpochapụwo, nke dị nso. Ị nwere ike were ya dị ka nnukwu onyinye maka ekeresimesi, ma ọ bụ maka ụbọchị ọ bụla ọzọ.
Ebee ka ịzụta ha?
Enwere ọtụtụ ụlọ ahịa pụrụ iche iji zụta egwuregwu bọọlụ, yana ụlọ ahịa ihe egwuregwu ụmụaka na-agụnyekwa ụdị egwuregwu a maka ndị okenye. Otú ọ dị, otu n'ime nhọrọ kachasị mma bụ ịzụrụ n'ịntanetị na nyiwe dị ka Amazon, ebe ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu na ọ ga-abụ na ị gaghị ahụ na ụlọ ahịa niile. Na mgbakwunye, enwere ọnụ ahịa dị iche iche na nkwalite oge ụfọdụ nke ị nwere ike iji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ndị okenye
Egwuregwu kachasị mma maka ụmụaka
Egwuregwu bọọdụ kacha mma maka ezinụlọ